Sweden oo ogolaatay safarada gudaha ah ee dalkaas. - NorSom News
Sweden oo ogolaatay safarada gudaha ah ee dalkaas.
Reysulwasaaraha dalka Sweden Stefan Lovfen ayaa shir jaraa´id oo uu shaley qabtay ku sheegay in dowlada Sweden ay ogolaatay safarada gudaha dalka Sweden ah, wixii ka danbeeyo 13-ka bishan Juni.
Dowlada Sweden ayaa ogolaatay in dadka dalkaas kunool ay isaga gudbi karaan magaalooyinka gudaha ah ee Sweden, hadii aysan jirin calaamado muujinayo inay qabaan xanuunka Covid-19.
Sweden ayaa ah dalka uu saameynta dhimasho ee ugu badan ku yeeshay xanuunka Corona-virus, marka la barbardho wadamada kale ee Nordica. Shaley oo kali ah waxaa Sweden covid-19 udhintay 74 qof oo Sweden kunool.
Xigasho/kilde: Sverige åpner for innenlandsreiser
Previous articleAkhri natiijada xukunka: Qaabkan ayay maxkamadu u qiimeysay khilaafka Tawfiiq.
Next articleFHI: sanadkii hore 294 dumar uur leh ah, ayaa jidka ama guriga ku dhalay.